Umaki: i-hostgator | Martech Zone
Ngokunokwenzeka Umbhalisi Wesizinda Esibi Kunabo Bonke
NgoLwesibili, ngoJuni 28, i-2016 NgoLwesibili, ngoJuni 28, i-2016 Douglas Karr
Namuhla ekuseni sithola ucingo oluhlasimulisayo oluvela kwiklayenti. Sisebenze nabo ukwenza isayithi elisha emuva, kepha konke bekungaxhunyiwe ku-inthanethi manje. Inkinga ye-DNS yohlobo oluthile. Umfana wabo we-IT usibizile ukubona ukuthi kukhona yini esikushintshile. Besingakahlali kodwa njalo sizonda ukuzwa ngalezi zinkinga futhi besifuna ukubasiza ukuxazulula inkinga. Kwesinye isikhathi kuyinto elula njengokufaka ikhadi elidala lesikweletu
Le infographic evela ku-Hostgator igxuma phakathi kokukhangisa nokwenyusa, amathuluzi nemicimbi yangempela yokukhangisa yedijithali. I-SEO isu, kepha i-Analytics akuyona isu - ithuluzi lokusiza ukuthola isu. Ukumaketha okukhokhelwe kuyingxenye yecebo eliphelele kepha hhayi isu ngokwalo. Futhi ukuguqulwa akulona isu, kungumphumela wecebo. Kuyaxaka ukuthi bakubeka kanjani ndawonye, ​​kepha kukhona amathuluzi athile, ama-tidbits,